Xa iyi-50 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
I-COVID QAPHELA (ukususela kuNov 2021): Sigcina ngokungqongqo ubuncinci ii-24h phakathi kweendwendwe (kwaye zigonywe ngokupheleleyo)
I-Timber House ibonelela ngendlela enkulu yokubaleka kwabo baxakekileyo kwaye badiniwe bubomi besixeko. Yiza uzitshaje kwakhona kule ndawo yabucala, apho ingqalelo kwiinkcukacha idala amava awodwa nangenakulibaleka. I-Timber House yakhelwe abo banokuxabisa ukugqibelela okulula. Inegadi yayo ebanzi, i-sauna kunye nendawo yokuphumla, kwaye ikufuphi nendalo.
Indlu inomgangatho omnye kunye nekhitshi kunye nendawo yokutyela, igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala kunye negumbi lokulala. Yakhiwe njengekhaya le-50 sqm ukusuka kutsha nje kulwakhiwo lwendlu yomthi, i-cross-laminated timber (CLT), enefestile enkulu, kunye nokufudumeza okuphantsi kwindlu yonke.
Ikhitshi kunye nendawo yokutyela yeyangoku, intsha, kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo. Izixhobo zombane ezifumanekayo ziquka i-oveni yombane enento yokupheka yokungenisa ulwazi, imicrowave, ifriji kunye nesikhenkcezisi, umatshini wokuhlamba izitya, umenzi wesonka, umpheki werayisi, iketile, kunye nembiza yokuvuza yaseJapan kunye nembiza yemoka yaseTaliyane. Kubandakanywa zonke iziqholo zokupheka eziyimfuneko, izitya kunye ne-dinnerware.
Igumbi lokuhlambela libonisa ishawa yokuhamba, i-washer-dryer kunye nokufikelela ngokuthe ngqo kwidesika efihlakeleyo yokomisa iimpahla ezongezelelweyo.
Igumbi lokuhlala lilungele ukufunda okanye ukubukela umabonakude wesathelayithi (sathelayithi/yasekhaya/iNetflix) kwiTV enescreen esicaba. Inekona yesofa yokuphumla enokuguqulwa ibe yindawo yokulala eyongezelelweyo.
Impahla kunye nemithwalo ingagcinwa kwi-walk-in closet ebanzi.
Olona phawu luphambili lwegumbi lokulala sisiko elenziwe ngesitayela saseJapan sobukhulu bendlovukazi enebhedi eyenziwe ngomqhaphu oshwabeneyo wendalo kunye nombono ozolileyo wohlaza lwepropathi.
Kwabo bafuna indawo yokusebenza, kukho indawo yokusebenza enoxolo. Igumbi lokulala linokufikelela kwi-terrace enkulu yabucala - eyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla emva kosuku oluxakekileyo.
I-intanethi yasimahla nengenamda enesantya esiphezulu iyafumaneka kwindlu yonke. Uqhagamshelo lwe-ethernet olunentambo luyafumaneka kwigumbi lokuhlala.
I-Timber House ixhotyiswe ngeyunithi ye-AC enezihluzo zokuphucula umgangatho womoya.
I-Timber House ngoku ineNdlwana yooNomatse esanda kwakhiwa; i-sauna yangasese enendawo yokuphumla. Iindwendwe ziyakwazi ukuphumla kwi-sauna unyaka wonke, zithathe ishawa okanye ibhafu yokuphumla (ngaphandle kwexesha lokukhenkceza !!!) kwindawo edityaniswe ngokukodwa kwigadi yangaphandle.
Bonisa zonke 82 izinto onokuzisebenzisa
Lo mhlaba umi kwicala elingasezantsi lesixeko kwindawo ezolileyo yaseNovy Hradec Kralove, ephezu kwenduli ekukuphela kwayo esixekweni. Oku kunika iimbono ezimangalisayo kwaye ngosuku olucacileyo iincopho eziphezulu zelizwe ziyabonakala.
Indawo yoqwalaselo kunye nenqanaba eliphezulu leplanethiriyayam kukuhamba ngemizuzu eli-9 kuphela. Banikezela ngesibhakabhaka ebusuku kunye nemibono yelanga kuluntu ngokubanzi.
Ipropathi ikwakufuphi nelinye lawona mahlathi edolophu amakhulu kweli lizwe, apho umntu anokonwabela ukukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile okanye iindlela zokuhamba nge-skating. Amachibi asekuhlaleni anika iintlanzi ezintsha zokojwa. Kukho ikhosi yegalufa enemingxuma eli-9 enoluhlu lokuqhuba oluyi-1.3km kuphela.
Ngelixa ilizwe elinoxolo lingumzobo omkhulu xa uhlala apha, umbindi wedolophu ubonelela ngezinto ezininzi ezibonwayo kwaye kukukhwela ibhasi kuphela okanye uhambo lwemizuzu esi-7 ngemoto.
Ukungena emntwini lukhetho olungagqibekanga kuzo zonke iindwendwe, njengoko oku kuqinisekisa ukuba unamava angenasiphako wokufika. Ndiza kukuvuyela ukukubonisa ipropathi kunye nokuphendula nayiphi na imibuzo onokuthi ube nayo kwaye, okona kubaluleke kakhulu, ndikunikeze izitshixo ngokobuqu.
Nceda uqinisekise ukuba ufunda imiyalelo yokufika ngononophelo.
Ukuzihlola ngokwakho, ngelixa kufumaneka, kunikezelwa kuphela emva kwesivumelwano sangaphambili kunye kwaye kugcinelwe iimeko ezingaqhelekanga, ezifana nokungena kade kakhulu ngenxa yokulibaziseka kwisikhululo seenqwelo-moya okanye iimeko ezifanayo ezithethelelayo.
Ukungena emntwini lukhetho olungagqibekanga kuzo zonke iindwendwe, njengoko oku kuqinisekisa ukuba unamava angenasiphako wokufika. Ndiza kukuvuyela ukukubonisa ipropathi kunye noku…